"Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava… Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany." Efesiana 5:8,11
"Fadio ny fanao ratsy rehetra." 1 Tesaloniana 5:22
Efa manomboka malaza eto amintsika izao ny fetin’ny Halloween sy ny harendrina sarina voatavo mampatahotra. Maro ny olona no tsy mahita ao amin’ireny fety ireny, afa-tsy fialamboly tsotra sy famalifaliana ankizy.
Ny tokony hanaitra ny kristiana anefa, dia ny fanaovana ny fahafatesana ho toy ny zava-mahazatra, amin’ireny fihetsiketsehana ireny. Atao antony ialam-boly mihitsy aza izy ireny! Ankehitriny dia samy hita ny tsy fanajana an’Andriamanitra sy ny fandavana ny fahatahorana fahafatesana. Manjary atao tsara fanahy sy azo ifaneraserana ny herin’ny ratsy, na dia amin’ny endriny mandoza indrindra aza; ary mora foana dia zatra azy, rehefa miharoharo aminy dieny mbola kely.
Aoka isika handositra ireny fihetsiketsehana ireny, aoka hampitandrina ny zanatsika fa poizina manadonto ny saina sy fo ireny. Aoka ho ao an-tsaina lalandava fa miafina ao ambadik’ireny zavatra toa tsy mitera-doza sy maha te ho tia ireny, ny sehatry ny maizina izay anjakan’i Satana. Na oviana na oviana ny Baiboly dia tsy mampiseho an’i Satana ho bonaika na mampihomehy, fa tena miasa, mahery, mampidi-doza. Fomba maro no amitahany, anisan’izany ny sikidy, majia, fanandroana, fiantsoana fanahy ratsy, mosavy, filalaovana ody… Na dia efa resy aza izy, noho ny nahafatesan’i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin’ny maty, dia mbola miasa sy manao ratsy mandrakariva. Mandra-panipy azy tokoa any amin’ny “farihy afo sy solifara” (Apokalypsy 20:10), dia miezaka izy hanandevo ny olona tiany hotaomina hanaraka azy. Mampiasa ny heriny mampivarahontsana izy, mba hamitahany sy hamerezany mafy kokoa. Aoka isika tsy ho latsaka ao anatin’ireo fandrika velariny.